नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड मोबाइलमा पैसा घटायाे सुबिधा बड्याे, यस्तो छ कारण – bampijhyala.com
Home > सूचना प्रविधी > नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड मोबाइलमा पैसा घटायाे सुबिधा बड्याे, यस्तो छ कारण
३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:२१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि विभिन्न योजना ल्याएको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको यस्ता सुविधा लिन प्रत्येक महिना न्यूनतम ३८३.०७ रेण्टल शुल्क तिर्नुपर्दछ । यद्यपि कम्पनीले उपलब्ध गराएको कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) अफर वा अन्य विशेष पोस्टपेड अफर लिएका ग्राहकको हकमा भने यो रकम फरक हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
छिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका विभिन्न प्याकका प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले प्याक प्रयोग गर्दा यो रेन्टल चार्ज भन्दा छुट्टै रकम काटिन्छ । सस्तो दरका डाटा र भ्वाइस प्याक उपलब्ध भएकाले ग्राहकले यो रेन्टल चार्ज वापतको रकममा खासै ध्यान नगएको पनि देखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
“उदाहरणका लागि, कुनै पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले रु. २०० को प्याक प्रयोग गरेको छ भने प्याक वापतको रु. २०० र रेन्टल चार्ज वापतको रु. ३८३.०७ गरी रु. ५८३.०७ तिर्नुपर्छ । मानाैँ, १४ तारिखका दिन ग्राहकको मोबाइलमा बाँकी रकम रु. ४०० थियो भने सो रकम समेत काटिएर थप रु. १८३.०७ समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ,” प्रवक्ता राजेश जोशीले जनाएका छन् ।
सञ्चार गृह ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:२१
स्थानीय तहको अन्तिम बजेट आज आउँदै ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:२१
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:२१
हजुरको आजको दिन, आज – १० आषाढ २०७८ बिहिवार को राशिफल ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:२१
फेरी बढ्यो पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:२१